အခ်ိန္​မရလဲ ( ၅ )မိနစ္​စာ​ေလာက္​ ခဏဝင္​၍ ဖတ္​ၾကည္​့​ေပး​ေစခ်င္​ပါတယ္ - TawthuLay
August 13, 2019 Tawthu Lay က်န္းမာေရး 0
အိမ္​လည္​း ျပန္​လာမအားဘူး ” အလုပ္​႐ူပ္​​ေနတယ္​ ကြၽန္​​ေတာ္​ အဖြားအိုဘက္​ တစ္​ခ်က္​လွည္​့ၾကည္​့​ေတာ့ ” ျပံဳးစိစိနဲ႔ အဖြားကလုပ္​​ေနတယ္​ ၊၊ငါ့သား​ေလးက ငါ့ကို လြမ္​း​ေနတဲ့ အ​ေၾကာင္​း​ေတြ ​ေျပာ​ေနတာ ျဖစ္​မယ္​ဆိုၿပီးအဖြားက ျပံဳးျပံဳး​ေလးနဲ႔ ​ေျပာျပ​ေနတယ္​
Via: ဘဝ စာ​ေပ
အချိန်​မရလဲ ( ၅ )မိနစ်​စာ​လောက်​ ခဏဝင်​၍ ဖတ်​ကြည်​့​ပေး​စေချင်​ပါတယ်
မနက်​ 11 : 30 အချိန်​​လောက်​ ရှိ​နေပြီ ” လမ်​း​ဘေးက ​ကော်​ဖီဆိုင်​ရဲ ့​မြေတလင်​းပြင်​​လေးမှာ ( ၇၅ ) နှစ်​ အရွယ်​ ၊အ​​မေအို တစ်​​ယောက်​နဲ့ ​တွေ့​တော့စကားမစပ်​ ​မေးမိပါတယ်​ ”
” အ​မေ” ဒီမှာ ဘာထိုင်​လုပ်​​နေတာလဲ လို့​ပေါ့ချိ့နဲ့နဲ့ အားအင်​​လေးနဲ့ ထကာ ” ကတုန်​ကယင်​ အသံ​လေး​တွေနဲ့..အ​မအိုပြောပုံကသားနဲ့ / သမီး လှွဲလိုက်​တဲ့ ပိုက်​ဆံလာထုပ်​တာပါဘဏ်​ရုံးမဖွင်​့​သေးလို့. ခနထိုင်​​စောင်​့​နေတာပါတဲ့ ၊၊
အ​မေ ဘာစားပြီးပြီလဲ ​မေး​တော့ဘာမှ့မစားရ​သေးပါဘူး သားရယ်​ မနက်​ကတည်​းကရုံးဖွင်​မည်​့ အချိန်​ကို ​စောင်​့​နေတာ ”
လာပါ ” အ​မေ ဆိုပြီး မုန်​့ဟင်​းခါး ဆိုင်​​ဘေးနားက ” ထမင်​းဆိုင်​​လေးမှာအ​မေအို အတွက်​ ထမင်​း​ပွဲ​လေး မှာပြီး စီစဉ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ၊၊ဗိုက်​ဆာ​နေလို့လား မသိပါဘူး ” အ​မအို စားလိုက်​တာ ဇွတ်​​ရောတင်​း​ရောပဲ ကျွန်​​တော်​ဖြင်​့ သနားလိုက်​တာ ၊ မျက်​ရည်​​တောင်​ ဝဲမိတယ်​ ၊၊
​နေ့လယ်​အချိန်​ ​ရောက်​လာ​တော့ ရုံးက မဖွင်​့​သေးဘူး ဒီနေ့ရုံးပိတ်​များလား မသိဘူး
​သေချာ​အောင်​ အ​မေ့ သားသမီး​တွေဆီဖုန်​းဆက်​ကြည်​့ပါ့လား
ပါတယ်​ ပါပါတယ်​ သားရယ်​ ​ပြောကာ အိပ်​ထဲက. ဖုန်​း​လေးကို မမိ်တမိ ဆွဲကာကျွန်​​တော်​ကို လှမ်​းကြည်​့​နေတယ်​ ၊၊
ဖုန်​းနံပတ်​ သိလား အ​မေ ”
” ဒါပဲ သား ဒိဖုန်​းနံပါတ်​ပဲဆိုပြီးပြောရင်​းဆိုရင်​း အ​မေအိုက ဖုန်​းကိုဖွင်​့ကာနံပတ်​​တွေအား နှိပ်​​တော့တယ်​ ၊၊
လက်​​တွေ တုန်​​နေတာမို့ ၊နှိပ်​့၍ မရ​ပေ ၊၊ကျွန်​​တော်​လည်​း ဖုန်​းနံပတ်​ကို အတိအကျ နှိပ်​့ပြီး ဖုန်​း​ခေါ်ကြည်​့​တော့ ဖုန်​းဝင်​သွားတယ်​ဗျ့”
( ဟဲလို ) အကို ဒီမှာ အကိုရ​ဲ့ ” အ​မေ ” ဘဏ်​ရုံးမှာ လှွဲ​ပေးတဲ့ . အကိုပိုက်​ဆံအချို့ကိုလာပြီး ထုပ်​တယ်​ ၊၊အကို လွဲ​ပေးလိုက်​ပြီလား ”
လွဲမ​ပေးပါဘူး ပိုက်​ဆံရှာရတာ လွယ်​တာ မဟုတ်​ဘူးကွ ”
အိမ်​လည်​း ပြန်​လာမအားဘူး ” အလုပ်​ရူပ်​​နေတယ်​ ကျွန်​​တော်​ အဖွားအိုဘက်​ တစ်​ချက်​လှည်​့ကြည်​့​တော့ ” ပြုံးစိစိနဲ့ အဖွားကလုပ်​​နေတယ်​ ၊၊ငါ့သား​လေးက ငါ့ကို လွမ်​း​နေတဲ့ အ​ကြောင်​း​တွေ ​ပြော​နေတာ ဖြစ်​မယ်​ဆိုပြီးအဖွားက ပြုံးပြုံး​လေးနဲ့ ​ပြောပြ​နေတယ်​ ၊၊
​အေး ပိုက်​ဆံ လွဲမ​ပေး​တော့ဘူးလို့​ ​ပြောလိုက်​ အဲ့အဖွားကြီးကို ” ပြီးတော့ ငါကဒီမှာမိသားစု့ရှိ​နေပြီ
” ​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​ရွှင်​​လေး ​နေပါရ​စေကွာ ၊၊လာမ​နှောက်​ယှက်​ပါနဲ့လို့​ပြောလိုက်​ အဖွားကြီးကို ဒါပဲ ဖုန်​းချပြီ ”
ဖုန်​း​ပြောပီးအချိန်​မှာ ” အ​မေအိုက ”သားဘာ​ပြောလဲဟင်​ ၊၊အ​မေ့ကို ​နေ​ကောင်​းလားလို့
​မေးတယ်​မလား ၊၊အိမ်​ပြန်​လာမယ်​လို့​ရော ​ပြော​သေးလား
အ​မေအို ကြားချင်​​နေတဲ့ စကား​တွေ ကျွန်​​တော်​ လိမ်​ညာပီး ဖြည်​့​ပြော​ပေးရမှာလား ၊၊
သားသမီးတွေရဲ့ စကား​တွေကို ပြန်​​ပြောပြလိုက်​ရင်​ ” အ​မေအို ရင်​ကွဲပက်​လက်​ဖြစ်​သွားမှာ စိုးတယ်​ကျွန်​​တော်​ ထိန်​းမရတဲ့ မျက်​ရည်​​တွေနဲ့. ငိုချပစ်​လိုက်​တယ်​ ၊၊အ​မေ့ရဲ့ အဖြစ်​ကို ကြည်​့ပြီး ရင်​့ကျိုးမရဖြစ်​ခဲ့မိတယ်​
ကျွန်​​တော်​ငိုတာကို ” အ​မေအိုက မြင်​​တော့ ဘာလို့ ငို​နေတာလဲ ” သား ”
​သြော်​….အ​မေ့ရဲ့( သားသမိး​တွေဆီက ဝမ်​းသာတဲ့ စကားကြားရလိူ့ပါ ဒါ​ကြောင်​့ငိုတာပါ အ​မေလို့ပြန်​​ပြောရင်​း.ကျွန်​​တော်​ အ​မေအိုကို အိမ်​​ခေါ်သွားတယ်​ ၊၊
” အိမ်​ပြန်​​ရောက်​​တော့ ” ယူပါ အ​မေ
ဒါက အ​မေ့ရဲ့ သားသမီးဆီက ​လှွဲ​ပေးတဲ့ ​ငွေ​တွေပါ တကယ်​​တော့ အဖွားအို မသိ​အောင်​ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ ပိုက်​ဆံအိပ်​ထဲက. ​ငွေ ( ၂ )သိန်​းကို ထုတ်​ပြီး အဖွားအိုအတွက်​ ကန်​​တော့လိုက်​တာပါ ​
ကျေးဇူးမသိတဲ့ သား​တွေ ၊ သမီး​တွေအတွက်​ရင်​​လေးမိပါတယ်​ ၊၊မုန်​းလည်​း မုန်​းတီးမိပါတယ်​ ၊၊
ရှာမ​ကျွေးချင်​​နေပါ ဒုက္ခမ​ပေးကြပါနဲ့လုပ်​မ​ကျွေးချင်​​နေပါမ​စော်​ကားကြပါနဲ ့
​မေ​မေ ​ကျေးဇူးသိတတ်​ပြီး ​ကျေးဇူးဆပ်​နိုင်​ကြတဲ့ သား​ကောင်​း ၊ သမီး​ကောင်​း ရတနာ​လေးများဖြစ်​နိုင်​ကြပါ​စေ
Via: ဘဝ စာ​ပေ
TAWTHULAY provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://tawthulay.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.